थाहा खबर: नालायक ठट्टाबीच आएको नेपालको नक्सा र लिम्पियाधुरा
नेपाल यतिखेर तीनवटा गम्‍भीर प्रकारका संकटका बीचबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। एकैसाथ जस्तो आएका यी संकटलाई हामी नेपालीले धैर्य र साहसपूर्वक सामना गर्नु आवश्यक छ।
पहिलो संकट हो–– नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संकट। दोस्रो–भारतीय अतिक्रमणको नयाँ श्रृंखलाबाट उत्पन्न संकट। तेस्रो – सत्ताधारी पार्टी र सरकारको चरम विकृति र खिचलोबाट उत्पन्न संकट।
एउटा सानो आलेखमा यी सबै विषयमा व्याख्या विश्लेषण सम्भव छैन। यसमा सबैकुरा अटाउनु पनि सम्‍भव नहोला। तर पनि यहाँ भारतीय आक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न संकटको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
चार महिना भन्दा बढी भयो, कोभिड १९ संक्रमण सुरु भएको। संसारका अधिकांस राष्ट्रहरू यसको चपेटामा परेर आक्रान्त छन्। त्यसबाट नेपाल र भारत पनि अछुतो रहन नसकेको कुरा स्पष्ट नै छ।
यो महामारीका विरुद्धको लडाइँ आपसमा मिलेर मात्र लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा सहज वुद्धिले पनि बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यसमा पनि नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका छिमेकी राष्ट्र। यिनीहरूका सरकारका बीचमा त एक अर्कालाई यतिखेर कसरी सघाउन सकिन्छ भनेर सरसल्लाह हुनुपर्ने हो। उदारतापूर्वक एकले अर्कोलाई हैसियत अनुसारको सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, यस्तो बेलामा।
यसलाई एउटा विडम्वना नै मान्नु पर्छ कि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संकट परेकै बेला, यहि मौका छोपेर नेपाली भूभागमा भारतीय राजमार्ग बनाएको सगर्व घोषणा गरेको छ, भारत सरकारले, राजधानी दिल्लीबाट। त्यति मात्र होइन भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यसको उद्घाटन नैं गरिसकेका छन्।
देशमा यति ठूलो विदेशी अतिक्रमण भएको बेलामा यसविरुद्ध प्रमुख भूमिका खेल्ने दायित्व देशको सरकारको हुन्छ। यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले के भूमिका खेल्यो त? त्यसले यो समस्या समाधानमा कति योगदान पुर्‍यायो त? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
२०७६ कात्तिक १६ (नभेम्बर २, १९१९) का दिन भारतको मोदी नेतृत्वको सरकारले पुनः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेर नयाँ राजनीतिक नक्‍सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसको विरोधमा नेपालमा व्यापक विरोध भएकै हो। त्यसै दौरानमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको ठोस काम एउटा मात्र थियो – भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउने काम।
भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाएर त्यसको सार्वजनिक उद्घाटन नै गरि सकेपछि सरकारका विदेश मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्यसै प्रकारको नोट बुझाए। जवाफमा भारतीय राजदूतले उनको विदेश मन्त्रीको यो क्षेत्र भारतको भूमिमा पर्छ भनेर जारि गरिएको वक्तव्य थमाई दिए भन्ने समाचारमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री भन्छन् “मलाई थाहै छैन“
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सररकाद्वारा लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउनको समयमा पनि देशभक्तहरु सडकमा उत्रिरहेका छन्। सदनमा पनि यसको विरोधमा बोल्ने क्रम जारी छ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने “मलाई भारतले सडक बनाएको विषयमा कसैले जानकारी गराएन। मलाई यसबारे केही थाहा नै छैन।” जनता विरोधमा सडकमा उत्रि सके, प्रहरी र प्रदर्शनकारीको भिडन्त भै सक्यो। तर, प्रधान मन्त्री भन्छन् “मलाई थाहा छैन।” स्वभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ “यो देश कसले चलाएको छ? कसरी चलेको छ? ”
गत २०७६ मंसिरमा यो पंक्तिकार सहितको १० वटा पार्टीहरुको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दियो। त्यसैबेला भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी,लिपुलेक सहितको नक्सा छापेको र सँगसँगै त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा अवगत गराएको थियो। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले “मलाई थाहा छैन” भन्नु जस्तो नालायक ठट्टा थियो?
तर सडकको संघर्ष र जनताले उठाएको आवाजको परिणामस्वरूप सोमबार नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो।
यस्तो गम्भिर विषय प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन? थाहा नभएको भए उनले नेतृत्व गरेको सरकारबाट लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नक्साअनुसार अतिक्रमित नेपाली भूभाग मुक्त गराउने काम हुन्छ भनेर कसरी पत्याउनु? त्यसैले अझै नेपाल सरकार र भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सडकको दबाब कायम रहनुपर्छ।
किनभने जानिबुझि यस्तो अभिव्यक्ति दिने यस्तो सिल्ली नेतृत्व भएको सरकारको भर कसरी गर्नु ? यो नबुझ्नु मूर्खता हुँदैन त? राजनीतिमा गम्भीरता र शालीनताको अर्थ महत्व हुन्छ। त्यसरी नै ठट्टाको पनि अर्थ हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने?
नेपालले यो मुद्दालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ। वार्ताको प्रपंच छाडि दिए पनि फरक पर्दैन। यदि साँच्चै मोदीको ओलीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने सोचाई छ भने एक हप्ता भित्र त्यसलाई टुंग्याउन असम्‍भव छैन।
तर, वार्ताको आशा गरेर वा वार्ताको निहुँ गरेर जनता झुक्याउने काम अब नगर्दा राम्रो। यसको निमित्त नेपालले अब संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत, हेगमा आफ्ना प्रमाण सहित ढिलो नगरिकन लिखित दाबी पेस गर्नु पर्दछ। त्यसपछि नेपालको पक्षमा जनमत तयार गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि विश्वभरीनै नेपालको पक्षमा दवाव सिर्जना गर्ने काम गराउन सकिन्छ। सबै पार्टीहरू, संगठनहरु, व्यक्तित्वहरुले नेपालको पक्षमा शक्ति संचय गर्न भूमिका खेल्न सक्ने छन्।
त्यसकारण, यो समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण अनिवार्य बन्न पुगेको छ। यदि यो सरकारले यसमा तत्परता देखाउन सकेन वा चाहेन भने यसलाई सत्तामा रहिरहन यसको हैसियत पनि सकिन्छ। सरकारमा भएकाहरुले यो विषयलाई ख्याल ठट्टा नठान्दा राम्रो होला।